true tone-scale /zu-ZA/tools-for-life/tone-scale/steps/the-emotional-tone-scale.html read 4 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/tone-scale_zu_ZA.jpg I-Emotional Tone Scale
I-Hubbard Chart of Human Evaluation ungalisebenzisa ukuhlola kahle (ukunquma izinga, ukubaluleka noma incazelo) ukuziphatha komuntu futhi uqagele ukuthi umuntu uzokwenzani.
Abantu bebelokhu befuna ukwazi ukuqonda kangcono abanye abantu ezimpilweni zabo. Manje, nge Hubbard Chart of Human Evaluation, ungaqonda kangcono abanye abantu futhi uqagele izenzo nokuziphatha kwabo ngokuzayo.
I-Hubbard Chart of Human Evaluation. (Gaya njengekhasi elilodwa elikhulu.)
Lelishadi libonisa izimpawu zomuntu kulelo nalelo zinga le-Tone Scale. Izimpawu ziyizindlela ezahlukahlukene umuntu abuka noma aziphatha ngazo ezikusiza ukuba umazi. Ziyizinto ongaziqaphela ngqo kumuntu noma ezenzweni zakhe, kufaka phakathi lezibonelo ezilandelayo:
Izinga lakhe lokuziphatha (izimiso ezimayelana nokuthi yikuphi okuhle nokubi)
Ukuphikelela kwakhe esifundweni esithile (ikhono lokuqhubeka nokwenza okuthile yize unezinkinga ukukwenza)
Ukuphatha kwakhe iqiniso
Ama-tone scale agijima kusuka phezulu kuya phansi kweshadi. Ohlangothini lwesinxele lweshadi kunezinombolo ukukusiza ukukhumbula ngalinye izinga le-tone. Izinga ngalinye le-tone lingabizwa ngenombolo yalo kuphela. Isibonelo, ungasho ukuthi umuntu uku-3.5 (Ukuthakasela ngamandla) noma ku-1.5 (Intukuthelo).
Ngaphezulu kweshadi, ukusuka kwesobunxele kuye kwesokudla, yizimpawu ongaziqaphela kubantu. Lezimpawu zisebenza kuzinga ngalinye le-Tone Scale. Isibonelo, uma uku-3.0 ku-Tone Scale, khona-ke ngayinye yezimpawu zakho zikhonjiswa emabhokisini kusuka kwesobunxele ukuya kwesokudla ezingeni lika-3.0.
Ukuphela kwephutha ongalenza ekusebenziseni leli shadi ukucabanga ukuthi umuntu uyizinga eliphakeme ku-tone yelinye lezimpawu ukwendlula elinye. Ukwenza lokho kuzobe kungalungile. Izimpawu ezitholakala eshadini ngomuntu othile osezingeni elithile le-tone yilezo ezifakwe emabhokisini emigqeni eqondile, ukunquma kusuka kwesobunxele ukuya kwesokudla. Azizuli phezulu noma phansi eshadini kulelo zinga le-tone.
Nansi indlela yokusebenzisa ishadi. Cabanga ngomuntu omaziyo. Ngemuva kwalokho funda izincazelo emabhokisini bese uthola uphawu olulodwa owaziyo ukuthi luyiqiniso ngalowo muntu. Uyazi ukuthi kuyiqiniso ngoba ulubonile noma uluqaphele. Isibonelo, uyazi othile okhuluma ngokufa nokubhujiswa ngaso sonke isikhathi. Ubheka leyo ncazelo eshadini bese ubona ukuthi ngaphansi kwesigaba 10 “Inkulumo: Ukukhuluma,” ezingeni le-tone lika-1.5 (Intukuthelo), ithi “Izinkulumo zokufa nokubhujiswa kuphela. Inzondo.” Ungabe sewufunda amabhokisi akwesokunxele nakwesokudla, kuzinga elifanayo lebhokisi olitholile, futhi azokutshela okuningi ngalowomuntu.
Noma yimuphi umuntu angaba nezinsuku ezijabulisayo noma izinsuku ezidabukisayo futhi athole izindaba ezinhle noma izindaba ezimbi. Lapho kwenzeka izinto ezinjengalezi, umuntu angakhuphukela okwesikhashana phezulu noma phansi ku-tone eshadini.
Ake sithathe isibonelo somuntu onesizungu sempilo. Usezingeni le-tone lika-2.5 (Isizungu). Ngemuva kwalokho umenyelwa olwandle nabangane futhi, cishe ngasikhathi sinye, uyenyukela phezulu ku-Tone Scale ibe ku-3.5 (Isifiso Esinamandla). Ujabule namuhla. Kepha uma ebuyele ekhaya, akukho angakwenza futhi nezinga le-tone yakhe lingehla libuyele libe iSizungu njengoba ehleli nje embhedeni ebuka umabonakude.
Manje ake sithi lomuntu onesithukuthezi uthola umsebenzi wenza okuthile ayekade efuna ukuwenza. Umsebenzi omusha uguqula izinga lakhe le-tone isikhathi eside. Uvuka njalo ekuseni futhi ujabule kakhulu ukuya emsebenzini. Ukhuluma nabantu asebenza nabo futhi uthola ukuhlangana nabantu abasha. Lendlela entsha yokuphila imbeka esezingeni eliphezulu ku-Tone Scale isikhathi eside. Ubengakwazi ukuthukuthela noma ukudabuka noma ukuba nesizungu emini, kodwa lokho akuhlali isikhathi eside njengoba enomsebenzi wakhe awuthandayo futhi kumbuyisela emuva phezulu ku-3.5 (Isifiso Esinamandla). Ngakho-ke kukhona isilinganiso sezinga lokuziphatha komuntu ngamunye futhi yilokho okubhekayo lapho ufunda leli shadi. Noma ngubani angathukuthela okwesikhashana. Kepha umuntu oku-1.5 (Intukuthelo) kuzinga le-Tone Scale imini nobusuku.
Njengoba nje umuntu enezinga elijwayelekile le-tone, kanjalo futhi nomndeni noma iqembu labantu ayingxenye yabo bane-tone elijwayelekile. Izinga ye-tone yabantu abaseduze kwakho lingathinta i-tone yakho.
Ukwenza isibonelo, owesilisa oku-2.5 (Isizungu) angaqala ukwenza njengomuntu ku-1.1 (Intukuthelo Efihlakele) noma u-1.1 (Ukwesaba) uma ezithola ephakathi kwabantu abangathembeki ababelwa futhi benza izinto ezimbi.
Uma uhlala noma usebenza endaweni enezinga eliphansi le-tone, ungalindela ukuthi ekugcineni nawe ube ne-tone-ephansi. Lokhu kuyiqiniso ngomshado—umuntu uvame ukufanisa izinga le-tone yomlingani wakhe womshado.
Ungasebenzisa i-Hubbard Chart of Human Evaluation ukuqagela ukuziphatha komunye umuntu ngokubona ukuthi ukuphi eshadini bese ubheka wonke amabhokisi wezimpawu zakhe. Uyokube sewuyazi-ke ukuthi yini okumele uyilindele kuye.
Ungalisebenzisa futhi leli shadi lapho uqasha umuntu ukuthi akusebenzele noma uqala ubuhlobo nomuntu othile. Ungathola ukuthi yini okufanele uyilindele futhi, ukwazi ukuthi ulindelani, ungaqagela ukusebenza kwalowo muntu ngaphambi kokwenza noma yini okunye naye.
I-Hubbard Chart of Human Evaluation iphinde ikunikeze ukuqagela kulokho okungenzeka kuwe lapho usezindaweni ezithile noma lapho useduze nabantu abathile. Uzokwazi ukuthi bazokudonsela phansi noma bakukhuthazele phezulu ku-Tone Scale.
I-Tone Scale iyithuluzi elibaluleke kakhulu ukulisebenzisa ekuphileni nasekusebenzeni nabanye. Isebenzise ukukusiza empilweni yakho.